Ga-edobe abalị niile Tọgharịa okirikiri ụra m - BikeHike
Ga-anọdụ ala abalị niile Tọgharịa okirikiri ụra m
Kedu otu m ga-esi tọgharịa okirikiri ụra m n'otu abalị?
Ọ kwesịrị ka m teta ụra ma ọ bụrụ na enweghị m ike ihi ụra?
Otu abalị nwere ike imebi usoro ihi ụra gị?
Ịdọkpụrụ abalị niile nwere ike idozi usoro ihi ụra gị?
Kedu otu ị ga-esi agbaji okirikiri ụra na-adịghị mma?
Ọ dị njọ ịrahụ ụra naanị awa 4 kwa abalị?
Ndidina n'anya mechiri emechi ọ na-aguta ka izu ike?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbakee n'aka onye abalị niile?
Enwere ike melatonin ịtọgharịa okirikiri ụra?
Kedu otu m ga-esi tọgharịa elekere ahụ m?
Ndị abalị niile hà dị njọ?
Ị kwesịrị ịdị na-ehi ụra ụbọchị dum iji dozie usoro ihi ụra?
Kedu ka m ga-esi edozi onwe m ka m na-ehi ụra abalị niile?
Itete n'ụra ọ bụla ọ dị mma?
Kedu ka m ga-esi gbajie okirikiri nke iteta n'oge?
Kedu ihe mere m ji na-eteta kwa abalị n'elekere atọ nke ụtụtụ?
Awa ole ka Elon Musk na-ehi ụra?
Kedu ka m ga-esi hie ụra awa 8 n'ime awa 2?
Ogologo awa 5 ọ dị mma karịa nke ọ bụla?
Mba, ịmụrụ anya abalị niile ma ọ bụ ihi ụra na ngwụcha izu agaghị edozi usoro ụra gị. N'ezie, ime ihe ndị a nwere ike tufuo usoro ihi ụra gị ọbụna karịa.
Ndụmọdụ 10 maka ịtọgharịa usoro ihi ụra gị Hazie oge ụra gị, mana nwee ndidi. Anọla ụra, ọ bụrụgodị na ike gwụrụ gị. Ehila ụra, ma bilie n'otu oge kwa ụbọchị. Kpachara anya maka ịrapagidesi ike n'usoro ihi ụra gị. Zere ikpughe na ìhè tupu ịchọrọ ihi ụra. Zere iri nri ma ọ bụ imega ahụ n'akụkụ oge ụra.
Ọ bụrụ na ị naghị ehi ụra, iro ụra gị ga na-akawanye njọ ruo mgbe ị ga-emesị zuo ike. Ịrahụ ụra maka awa 1 ruo 2 nwere ike ibelata nrụgide ihi ụra ma mee ka ike gwụ gị n'ụtụtụ karịa ka ị ga-eme ma ọ bụghị site n'ịra ụra abalị dum.
Mgbe abalị enweghị izu ike, ndị mmadụ na-eche na ha nwere ike imezi ụra furu efu site n'ịlaba ụra n'isi ụtụtụ na ihi ụra n'echi ya. Nke a n'ezie na-enyere ndị mmadụ aka inwe ahụ iru ala, mana nchọpụta ọhụrụ na-achọpụta na naanị otu abalị nke ụra na-adịghị na-emetụta metabolism na cellular clocks biological clocks.
A na-atụ anya okirikiri gbara ọchịchịrị, akpa dị n'okpuru anya, ịhịa aka mgbe niile, na ịgbalị ime ka anya gị ghe oghe mgbe ị dọtara onye abalị niile iji dozie oge ụra gị. Ma, karịa nke doro anya, mmetụta dị mkpirikpi na ahụ gị, ịmụba abalị dum nwere ike inwe mmetụta dị ogologo oge na ahụ gị.
N'ebe a, anyị ga-ekpuchi ụzọ ụfọdụ iji tọgharịa usoro ihi ụra gị ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka agbanyụrụ ụda gị. Lee ìhè ụtụtụ. Mee mgbatị ahụ ugboro 3-4 n'izu. Dezie usoro ihe omume gị nwayọ. Zere ọkụ na-acha anụnụ anụnụ tupu ị lakpuo ụra. Anọla ụra. Zere iri nri tupu ị lakpuo ụra. Mepụta usoro oge ụra nke izu ike. Gaa njem ịma ụlọikwuu.
Ndị mmadụ na-ehi ụra na-erughị awa 7 ruo 8 a tụrụ aro kwa abalị nwere ike ịta ahụhụ site na ọnọdụ adịghị ala ala dịka ọrịa obi, oke ibu, ịda mbà n'obi, ọrịa shuga na ọbụna dementia, Fu na ndị ọkachamara ndị ọzọ na-ekwu.
Ọ bụ ezie na izu ike na anya gị emechighị ebido usoro REM gị wee nye gị ohere ịme elekere n'oge ụra ụfọdụ, ọ ka na-enye ụfọdụ uru dị ukwuu. Imechi anya gị na-eme ka uche gị dajụọ ma mee ka uru ahụ na akụkụ ahụ gị dị jụụ. Ọtụtụ ndị na-akpọ ya "ụra dị jụụ".
Ọ dịkwa mma ịnwe opekata mpe awa asaa ruo asatọ kwa abalị. Nke a ga-enyere ahụ gị aka ịlaghachi na nhazi oge. Ọ nwere ike were ụbọchị ma ọ bụ izu iji gbakee n'ụra ụra. Naanị otu awa nke ụra na-efunahụ chọrọ ụbọchị 7 iji gbakee.
Ihe akaebe sitere na obere nyocha nyocha na-arụtụ aka na mgbakwunye melatonin dị ka enwere ike inye aka ịtọgharịa okirikiri ụra ụra. 7ma melite ụra n'ime ndị nwere ọdụ ụgbọ elu. Ndị na-arụ ọrụ ngbanwe - ndị na-arụ ọrụ n'abalị - na-enwekarị nsogbu ihi ụra nke metụtara ụda okirikiri na-ezighi ezi.
N'okpuru bụ ndụmọdụ na-enye aka ga-enyere gị aka ịtọgharịa elekere ahụ gị ma nwee ọ enjoyụ n'ụkwụ gị. Zere ọkụ na-acha anụnụ anụnụ n'abalị. Jikwaa ụra ụra gị. Adịnala n'ihe ndina teta. Tọọ mkpu. Wulite ebe kwesịrị ekwesị. Zere kọfị. Na-emega ahụ kwa ụbọchị. Hazie onwe gị ka ọ bụrụ usoro ihe omume.
Ịrahụ ụra abalị niile dị njọ maka ahụike anụ ahụ gị n'ihi na ọ na-anapụ gị ụra dị mkpa. Ehighị ụra nke ọma na ndị na-ehi ụra abalị niile nwere ike belata nguzogide ahụ gị maka ọrịa na ọrịa. Ụra na-adịghị mma na ịrahụ ụra na-abawanye ohere gị maka (3): Ọbara mgbali elu.
Họrọ oge ịlanarị na oge ịmụrụ anya. Jide oge ndị a kwa ụbọchị, ọbụlagodi na ngwụsị izu ma ọ bụ ụbọchị ezumike. Gbalịa ka ịzenarị ụra ma ọ bụ ihi ụra ihe karịrị otu awa ruo awa abụọ. Site n'ịgbaso usoro oge niile, elekere ime gị nwere ike ịmalite usoro ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ị ga-anọrịrị abalị niile, ndụmọdụ ndị a nwere ike inyere gị aka ime ya n'enweghị nsogbu. Mee omume. Ụzọ kachasị mfe iji nọrọ abalị niile bụ ịtọgharịa elekere ime gị. Caffeinate. Ma zere ihe ọṅụṅụ ike. Were ụra. Bilie kwagharịa. Chọta ụfọdụ ọkụ na-egbuke egbuke. Jiri ngwaọrụ gị. Were saa ahụ.
Ọtụtụ n'ime anyị na-eteta ụra ugboro atọ ma ọ bụ anọ n'abalị n'ihi ihe dịgasị iche iche, a na-ewerekwa nke a dị ka akụkụ nke usoro ihi ụra nkịtị. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime anyị na-eteta ugboro ugboro, mgbe ụfọdụ ọbụna kwa awa abụọ ruo atọ n'abalị. Nke a bụ ihe kpatara nchegbu.
Otu esi akwụsị iteta n'oge na-emega ahụ mgbe niile. na-ezere caffeine na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali mgbe n'isi ụtụtụ (1 ma ọ bụ 2 pm) na-egbochi ọkụ n'ime ụlọ gị ma mee ka ọ dị jụụ, ọchịchịrị, na ntụsara ahụ. na-ekpuchi ihe ngosi na elekere gị na obere ọkụ ọ bụla ọzọ (ma ọ bụ na-egbuke egbuke) n'ime ụlọ ahụ.
Ọ bụrụ na ị teta n'elekere atọ nke ụtụtụ ma ọ bụ oge ọzọ ma enweghị ike ịrahụ ụra ozugbo, ọ nwere ike ịbụ maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Ndị a na-agụnye okirikiri ihi ụra nke na-adịchaghị mfe, nchekasị, ma ọ bụ ọnọdụ ahụike dị n'okpuru. Mwelite elekere 3 nke ụtụtụ gị nwere ike ime ugboro ugboro na ọ nweghị ihe dị njọ, mana abalị niile dị ka nke a nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke ehighị ụra nke ọma.
N'ihe ngosi na nso nso a na pọdkastị Ahụmahụ Joe Rogan, Elon Musk kwuru na ọ na-ehi ụra ihe dị ka awa isii kwa abalị - site na mkpa ọ dị, ma ọ bụghị ya, ọrụ ya na-ata ahụhụ. Mbanye ahụ Musk na-achụ data bụ nke onye ọ bụla nchoputa mmalite ma ọ bụ onye njikwa azụmaahịa kwesịrị iburu n'obi.
Otú ọ dị, usoro ndị a nwere ike inyere gị aka ịlanarị ụra na-adịru nwa oge. Nweta mgbatị ahụ dị mfe. Zere oge ihuenyo maka otu awa tupu ị lakpuo ụra. Debe ihuenyo na ihe ndọpụ uche ndị ọzọ n'ime ime ụlọ ihi ụra gị. Gbaa mbọ hụ na ọnụ ụlọ gị gbara ọchịchịrị. Belata oriri caffeine. Rie nri dị mma. Zere mmanya na-aba n'anya.
Mgbe ụfọdụ ndụ na-akpọ ma anyị anaghị ehi ụra nke ọma. Mana ụra awa ise n'ime awa iri abụọ na anọ ezughị, ọkachasị n'ime ogologo oge. Dị ka nnyocha e mere n'afọ 24 nke ihe karịrị mmadụ 2018 si kwuo, ike nke ahụ na-arụ ọrụ na-ebelata ma ọ bụrụ na ụra adịghị n'ime awa asaa ruo asatọ.
Ọ na-edobe ụra abalị niile na-emegharị usoro ụra gị
Azịza ọsọ ọsọ: Ịnọdụ n'ụra na-atọgharị okirikiri ụra m
Ịkwụsị Elu niile nwere ike ịtọgharịa okirikiri ụra gị
Ajụjụ: Otu esi emegharị okirikiri ụra n'otu abalị
Ajụjụ: Otu esi edozigharị okirikiri ụra gị n'otu abalị
Nwere ike Xanax tọgharịa okirikiri ụra
Ajụjụ: Melatonin nwere ike ịtọgharịa okirikiri ụra
Azịza ngwa ngwa: Ị nwere ike ịtọgharịa okirikiri ụra gị
Ajụjụ: Ị na-ehi ụra na-emegharị okirikiri ụra gị
Ibu ọnụ na-emegharị okirikiri ụra gị
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka iji tọgharịa okirikiri ụra
Ajụjụ: Otu esi tọgharịa okirikiri ụra ngwa ngwa